दाहाल र भट्टराईबीच दुई घण्टा लामो गोप्य छलफल के के कुरा भए ? « Naya Bato
दाहाल र भट्टराईबीच दुई घण्टा लामो गोप्य छलफल के के कुरा भए ?
काठमाडौं। माओवादीबाट अलग भइ नयाँ शक्ति गठन गरेका डा. बाबुराम भट्टराई र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शनिबार झण्डै दुई घण्टा लामो छलफल भएको छ।
अप्रेशनपछि आराम गरेर बसिरहेका नेता भट्टराई भेट्न दाहाल शनिबार टोखा पुगेका थिए। भट्टराईको स्वास्थ्यस्थिति बुझ्न पुगेका दाहाल र भट्टराईबीच लामो राजनीतिक तथा समसायिमक विषयमा छलफल भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएको माओवादी केन्द्र र आफ्नो अस्तित्व नै जोखाउन नसकेको नयाँ शक्तिबीच एकता गर्नुपर्ने पक्षमा दाहाल छन्। स्रोतका अनुसार शनिबारको भेटमा पनि दाहाल र भट्टराईबीच एकताका विषयमा छलफल भएको थियो।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल माओवादी र अग्रगामी शक्तिबीचको एकतामा जोड दिएका थिए। नयाँ शक्तिबाट नेताहरु धमाधम माओवादीमा फर्किन थालेका छन् तर भट्टराईले भने कार्यकर्तालाई विचलित नहुने आग्रह गर्दै आएका छन्।
सो भेटका क्रममा दाहालले माओवादीबाट विभिन्न समयमा विभाजित भएका शक्तिहरुबीचको एकता हुनुपर्ने भन्दै त्यसकालागि गम्भीर रुपले सोच्न भट्टराईलाई आग्रह गरेका थिए। दाहालले देशको जटिल राजनीतिक परिस्थितिलाई विचार गरेर माओवादी र अन्य शक्तिबीच एकता हुनुैपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले विगतका सबै गल्ती कमजोरीलाई समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको भट्टराईलाई जानकारी दिएका थिए।
जवाफमा भट्टराईले समग्र विषयमा समीक्षा गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताउँदै त्यसकालागि छलफललाई जारी राख्ने प्रस्ताव गरेका छन्। वैकल्पिक शक्तिका रुपमा भट्टराईले गठन गरेको नयाँ शक्ति नेपालले स्थानीय निर्वाचनमा जज्जास्पद हार व्यहोरेपछि नयाँ शक्तिका नेताहरुले धमाधम पार्टी छोड्न थालेका छन्।
नयाँ शक्तिका नेता रामचन्द्र झा र रामकुमार शर्मा माओवादीमा फर्किसकेका छन् भने भट्टराईका दाहिने हात मानिने नेता देवेन्द्र पौडेलसहितका नेता नयाँ शक्ति छोड्ने तयारीमा छन्। पार्टीले निर्वाचनमा राम्रो गर्न नसकेको र पार्टीभित्र एक्लिदैं भएका भट्टराई र दाहालबीचको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।